सक्किगो नि ! - कुराकानी - साप्ताहिक
सक्किगो नि !
मानिसका आ–आफ्नै दु:ख छन् । कसैलाई नभएर दु:ख, कसैलाई भएर, कसैलाई नपुगेर दु:ख, कसैलाई पुगेर । हास्य टेलिश्रृंखलाबाट परिचित कुमार कट्टेल अर्थात् जिग्री ब्रोले नाम र दाम दुवै कमाएका छन् । उनका फ्यान फलोईङ टन्नै छ । उनलाई के–को दु:ख होला ? कुमार कट्टेल यसै साता रामजी ज्ञवालीसँग गफिए ।
दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ ?
बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म विभिन्न काममा व्यस्त हुन्छु । हिजो भद्रगोल मात्र थियो, अहिले चारखालमा यो रेस्टुराँ चलाउन थालेका छौं । चाँडै क्रिकेट स्टेडियमको काम पनि सुरु हुँदैछ । मैले कल्पना गरेको क्रिकेट स्टेडियमको काम धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत अघि बढ्दैछ । त्यसबाहेक मेरा दाजुभाउजूले निर्माण गर्न लागेको चलचित्रको स्क्रिप्टको काम पनि हेरिरहेको छु ।
भनेपछि दु:खै रहेछ ?
यति दु:ख नगरे त सुख कहाँ पाइन्छ र ?
भद्रगोल टिमले चलचित्र निर्माणमा पनि हात हाल्दैछ भन्ने कुरा सही हो ?
सही हो । हामी चाँडै चलचित्र घोषणा गरी छायांकनमा जाने तयारीमा छौं ।
त्यो कस्तो चलचित्र हुनेछ ?
सामाजिक कमेडी ।
बजारमा यस्ता चलचित्र चलेका आधारमा त्यस्तै विषय छान्नुभएको हो ?
किन ढाँट्नु ? अहिले हास्य चलचित्रको बजार राम्रो छ । त्यही भएर यता हात हाल्न लागेको हो ।
माघ लाग्दैछ, विवाह गर्ने बेला भएन ?
तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो, तर कहिले हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ ।
फेला त पार्नुभएको होला ?
भेटिएकी छैनन् । भेटिइन् भने जानकारी गराइहाल्छु ।
तपाईंकी ड्रिम गर्ल कस्ती छिन् ?
मसँग जिन्दगी बिताउन सक्नुपर्‍यो । मेरो पारिवारिक एवं व्यवसायिक सबै जिम्मेवारीमा एडजस्ट हुनुपर्‍यो । त्यति भए, भैगो नि, अरू के चाहियो र ?
बिहान कति बेला उठ्नुहुन्छ ?
ढिलो सुत्ने बानी छ । सधैं जसो १–२ बजे सुत्छु । त्यसैले उठ्न ढिलो हुन्छ । अझ यो जाडोमा त बिहान १० बजेसम्म सुतिन्छ ।
खाना घरमै खानुहुन्छ कि बाहिर ?
मन पर्ने खाना त घरकै हो । आमाले बनाएको खानाको त वर्णन नै गर्न सक्दिनँ । यद्यपि कामका कारण प्राय: बाहिरकै खाना खानुपर्छ ।
कस्तो खाना मन पर्छ ?
टिपिकल दाल, भात, तरकारीसँगै थोरै चटनी ।
चिया–कफी के पिउनुहुन्छ ?
कालो चिया पिउने बानी छ ।
जाडो मौसम छ, गर्मी मन पर्छ कि जाडो ?
गर्मीमा जाडो मन पर्छ, जाडोमा गर्मी, तर दुवैलाई दाँज्ने हो भने जाडोनै मन पर्छ ।
तपाईंले बोल्ने थेगो सक्किगो नि निकै हिट भयो, यसको आइडिया कसरी आयो ?
भद्रगोलको सुटिङ भैरहेको थियो । सुटिङ सकिनै लाग्दा अन्तिममा अन द स्पट सक्किगो नि भन्दिएछु, सबैले दामी भो भन्नुभयो । त्यो दृश्य जस्ताको तस्तै प्रसारण भयो । मिस्टेकमा बोलिएको त्यो शब्द यति हिट भयो कि, अचम्मै लाग्यो । त्यसपछि सक्किगो निको गीतै बन्यो, जसलाई सबैले गुनगुनाउँदै हिँडे ।